Waxa Uu Jose Mourinho & Guardiola Ka Matalo, 12-ka Xidig Ee Ee Farxada Ku Soo Dhawanaya Frank Lampard Iyo Hamigii Jamaahiirta Blues Oo Rumoobay. - Gool24.Net
Waxa Uu Jose Mourinho & Guardiola Ka Matalo, 12-ka Xidig Ee Ee Farxada Ku Soo Dhawanaya Frank Lampard Iyo Hamigii Jamaahiirta Blues Oo Rumoobay.
June 27, 2019 Mahamoud Batalaale
Maamulka kooxda Chelsea ayaa go’aan adag qaatay waxayna heshiis la gaadheen halyaygii hore ee Frank Lampard kaas oo si toos ah u badalaya Maurzio Sarri oo dhawaan Stamford Bridge ka baxay isla markaana Juventus la wareegay.
Lampard ayaa ogolaaday heshiis saddex sano ah oo uu ku qaadan doono £16.5 milyan gini wuxuuna todobaadka soo socda ka soo xaadiri doonaa xarunta tababarka Chelsea halkaas oo uu ciyaartoyda fasaxa ka soo laabanaysa uu kula kulmi doono.
Frank Lampard waxa uu leeyahay khibrada hal xili ciyaareed oo kaliya oo uu ku soo qaatay kooxda uu hadda ka soo baxayo ee Derby County oo ka ciyaarta horyaalka heerka labaad ee England, laakiin waxa uu haystaa taageerada buuxda ee jamaahiirta kooxdiisii hore ee Blues.
Frank Lampard ayaa sidoo kale taageero wayn ka helay khabiirada kubbada cagta iyo halyayadii hore ee kubbada cagta Ingiriiska waxaana loo saadaaliyay in uu guulo la gaadhi doono Chelsea.
Halyaygii hore ee England ee Frank Lampard ayaa heerka ugu saraysa ee kubbada cagta Ingiriiska ku maamuli doono Blues xili ciyaareedka cusub wuxuuna rajaynayaa in khibrada uu u leeyahay kooxdiisa iyo waliba horyaalka Premier League ay caawin doonto.
Muxuu Frank Lampard kala mid yahay macalinkiisii hore ee Jose Mourinho iyo Pep Guardiola?
Jose Mourinho iyo Pep Guardiola waa laba ka mid ah tababarayaasha ugu guulaha badan kubbada cagta casriga ah laakiin waxaa jira waxyaabo uu Frank Lampard kala mid yahay marka loo eego waqtigan uu kooxda Chelsea la wareegayo.
Frank Lampard ayay da’diisu tahay 41 sano jir waana isla da’dii uu Jose Mourinho kula wareegay isla kooxda Chelsea sanadkii 2004 kii waxayna jamaahiirta Blues rajaynayaan in Lampard uu kooxda ula guulaysto qaabkii uu Mourinho oo 41 sano jir ahi ula soo guulaystay.
Inkasta oo uu Jose Mourinho khibrad ahaan 41 sano jir uu kaga fiicnaa Frank Lampard, haddana heerka da’dooda ayaa ah mid isku mid ah waana sababta uu Lampard u noqon karo mid waxyaabo kale ka dhaxli kara maamulkii Mourinho ee uu waqtiga dheer ka soo hoos shaqeeyay.
Dhinaca kale Frank Lampard ayaa dhinac kala mid ah Pep Guardiola waana dhinaca khibrada oo uu xataa Lampard ku sareeyo markii ugu horaysay ee Guardiola loo ogolaaday in uu Barcelona macalin u noqdo.
Pep Guardiola ayaa shaqada Barcelona loo magacaabay isaga oo 38 sano jir kaliya ahaa isla markaana hal sano oo kaliya soo maamulay kooxda Barca B, waxayna taasi muujinaysaa in Frank Lampard uu xataa Guardiola kaga horeeyo in uu koox magac leh soo maamulay hal sano.
Waa Kuwee 12-ka Ciyaartoy Farxada Ka Muujinaya Soo Laabashada Frank Lampard Ee Chelsea?
Frank Lampard waxa uu Chelsea imanayaa iyada oo ganaax dhinaca suuqa kala iibsiga ah laga saaray isla markaana ayna wali helin fursad dib loogu dhigi karo waxaana jira ilaa 12 ciyaartoy oo da’yar u badan oo Lampard u arka mid ay wanaag ka heli karaan.
Frank Lampard ayaa dib kooxda ugu soo dhawayn doona 12 kan xidig ee amaahda kooxda kaga maqnaa kuwaas oo uu ka dhex heli karo kuwo saxiixyo cusub oo kale u noqon kara Chelsea si ay uga maarmaan xidigo ay lacag badan ku lumin lahaayeen.
Frank Lampard ayaa sidoo kale badali kara xaalada ciyaartoy kale oo kooxda sii joogay kuwaas oo aan Sarri ka helin waqti ku filan oo ay ku ciyaaraan.
In maamulka Chelsea ay markii ugu horaysay kooxdooda u magacaabayaan xidig kooxdooda saamaynta ugu wayn abid ku soo yeeshay oo aan waliba lahayn khibradii tababaranimo ee ay hore wax ugu xulan jireen, waxay muujinaysaa in isbadal wayni uu Stamford Bridge ka dhacay.